के हो ‘सडन कार्डियक अरेस्ट’ ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ९, २०७४ अतुल मिश्र
प्रकाश दाहालका निजी चिकित्सक डा. जेपी जैसवालले उनको मृत्यु सडन कार्डियक अरेस्टले भएको हुन सक्ने आशंका गरेपछि यो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सबैको चासो बढेको हो । एक्कासि हुने मृत्युमा सडन कार्डियक अरेस्टको समस्या बढ्दो छ । एससीए भनेकै एक्कासि मुटुले काम गर्न छोड्नु हो ।
यो यस्तो स्थिति हो, जसमा हाम्रो मुटुको चाल ३००–४०० देखि १००० सम्म पुग्छ, जब कि त्यो सामान्य अवस्थामा करिब ६० देखि १०० सम्म हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा रक्तचाप एक्कासि तल झर्न थाल्नुका साथै मुटुको विद्युतीय तरंगमा अनियमितता आउँछ । मुटुको पम्प गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा रगत अन्य अंगमा जान पाउँदैन र मुटुले काम गर्न छोड्छ ।
‘एससीए र एससीडी (सडन कार्डियक डेथ) हार्ट अटयाकजस्तो होइन,’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल भन्छन्, ‘मुटुसम्बन्धी रोग भएका व्यक्ति एससीएको उच्च जोखिममा हुन्छन् । एससीए स्वस्थ देखिने, मुटुरोग नदेखिएका र एससीएका अन्य जोखिम नभएका व्यक्तिमा समेत हुन सक्छ ।’
हाम्रो मुलुकमा बर्सेनि हुने एससीएको संख्याबारे अध्ययन, अनुमान नरहे पनि अमेरिकास्थित ‘हार्ट रिदम सोसाइटी’ का अनुसार त्यहाँ बर्सेनि ३ लाख ५० हजार मृत्यु यस्तै शारीरिक समस्याले गर्दा हुन्छ । अर्थात्, हरेक डेढ घण्टामा एक अमेरिकीको मृत्यु एससीएले गर्दा हुन्छ । यस्ता समस्या देखिएका ९५ प्रतिशत व्यक्ति केही मिनेटमै चिकित्सा सुविधा नपाएर अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा समेत मर्ने गरेका छन् ।
एससीएमा मस्तिष्कतर्फ जाने रगत रोकिँदा व्यक्तिविशेष बेहोस हुन्छ, सास, नाडी र मुटुको चाल बन्द हुन्छ र दुईतीन मिनेटमै उपचार नभए बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।
डा. ओममूर्तिका अनुसार सडन कार्डियक एरेस्ट भएपछि तीन मिनेटभित्र बिरामीलाई दिइने कार्डियो पल्मोनरी रेस्युसाइटेसन (सीपीआर) ले ज्यान जोगाउन सकिन्छ । सीपीआर घटनालगत्तै तुरुन्त दिन सुरु गर्नुपर्छ । किनभने मुटुले काम गर्न छोडेको हरेक मिनेटमा बाँच्ने सम्भावना १० प्रतिशत कम हँुदै जान्छ ।
के हो सीपीआर ?
नाडी, मुटुको धडकन र सास नभएको अवस्थामा मात्र सीपीआर गरिन्छ । यो आकस्मिक अवस्थामा दिइने प्राथमिक चिकित्सा हो, जसमा बिरामीको छाती छिटछिटो निरन्तर थिचिन्छ ।
यसअन्तर्गत बिरामीलाई कुनै ठोस स्थानमा पिठ्युँको आडमा सुताइन्छ । सीपीआर दिने अचेत व्यक्तिको छातीको सामुन्ने घुँडा मारेर बसी यो प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यसअन्तर्गत बिरामीको छातीको बीच भाग (स्ट्रर्नम : गर्दनदेखि पेटसम्मको हाड) मा दुवै हातले निरन्तर थिचिन्छ । एउटा हातको पन्जा बिरामीको छातीमा राखेर अर्को हातलाई त्यसमाथि राखेर औंलालाई आपसमा छिराई छातीलाई डेढ–दुई इन्चसम्म थिचिन्छ ।
हातलाई माथि नउठाउँदै यो प्रक्रियालाई एक मिनेटमा १०० पटकको गतिले गरिन्छ । सीपीआर चिकित्सकीय सहायता नपाएसम्म वा व्यक्ति होसमा नआउन्जेल गरिराख्नुपर्छ ।
छातीलाई निरन्तर थिच्नाले मुटु, स्ट्रर्नम र पछाडिको हाडको बीचमा दबाब उत्पन्न हुन्छ र अक्सिजन भएको रगत मस्तिष्कतर्फ बगिराख्छ । यसो गर्नाले बिरामीको मस्तिष्क जीवितै रहन्छ ।
हार्ट अटयाक र एमसीएमा फरक
हार्ट अटयाक मुटुको रक्त सञ्चारसम्बन्धी समस्या हो तर एससीआर मुटुको विद्युत् प्रवाह (इलेक्ट्रिक कन्डक्सन) को गडबडी हो । हार्ट अटयाकमा रगतको नलीमा अवरोध (ब्लक) ले गर्दा मुटुमा रगतको आपूर्ति हुन पाउँदैन भने कार्डियक अरेस्टमा विद्युतीय असन्तुलनले गर्दा मुटुको धडकन बन्द हुन्छ ।
तर दुवै रोगको लक्षण र यसले शरीरमा पर्ने असर फरकफरक हुन्छ । मुटुको रक्त सञ्चारमा अवरोध (ब्लकेज) हुँदा हार्ट अटयाक हुन्छ । मुटुको विद्युत्सम्बन्धी गडबडीले कार्डियक अरेस्ट हुन्छ । दुवै समस्या ज्यान लिने खालका हुन्छन् । छातीमा गाह्रो हुनु, सास रोकिन थाल्नु, वान्ता आदि हुनु हार्ट अटयाक र एक्कासि बेहोस हुनु, नाडी/सास रोकिनु कार्डियक अरेस्टका लक्षण हुन् । बिनाकुनै संकेतले हुने कार्डियक अरेस्टमा केही मिनेटमै मृत्यु हुन सक्छ ।
हार्ट अटयाकको समय पनि मुटु शरीरको बाँकी भागमा रगतको सञ्चार हुँदै गर्छ, तर कार्डियक अरेस्टमा मुटुले रगतको सञ्चार बन्द गर्छ । हार्ट अटयाकताका प्रभावित व्यक्ति होसमै हुन्छ, तर कार्डियक अरेस्टमा सास नचले बिरामी कोमामा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
हार्ट अटयाकपछि कार्डियक अरेस्टको खतरा बढ्न सक्छ । कार्डियक अरेस्टको सबैभन्दा प्रमुख कारण हार्ट अटयाक हो । मुटुको रक्तनली बन्द हुँदा अक्सिजनको आपूर्ति हुँदैन । यसबाट रासायनिक अस्थिरता हुन्छ र मुटुको चालमा गडबडी उत्पन्न हुन्छ,। जसले कार्डियक अरेस्ट हुन सक्छ । ‘हार्ट अटयाक भएको समयदेखि नै मुटुको चालमा गडबडी हुने जोखिम उच्च हुन्छ,’ डा. ओममूर्ति भन्छन्, ‘र, यो प्राय: हार्ट अटयाक भएको पहिलो एक घण्टामा देखिन्छ ।’ कार्डियक अरेस्ट भएका बिरामीलाई सीपीआर गरेर अस्पताल लग्दा बाँच्ने सम्भावना बढ्छ । यस्ता रोगीलाई सीपीआर, समयमै डिफिब्रिलेटरद्वारा दिइने विद्युतीय सक, पेसमेकर आदि उपयोग गरेर जोगाउन सकिन्छ ।
कार्डियक अरेस्ट भए ?
यस्तो स्थितिमा तुरुन्त सीपीआर सुरु गरेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । कार्डियक अरेस्ट हँुदा एकएक सेकेन्ड मूल्यवान् हुने भएकाले अलिकति पनि समय खेर फाल्नु हुँदैन । सीपीआरले गर्दा चिकित्सकीय सहयोग नपाएसम्मको अवस्थामा शरीरमा रगत र अक्सिजनको सञ्चार भइरहन्छ ।
अस्पतालमा मुटुलाई विद्युतीय झडका दिएर नियन्त्रित गरिन्छ । यस्तै, एससीएको बढी जोखिम भएकाहरूलाई बचाउनका लागि इम्प्लान्टेबल कार्डियोभर्टर डिफिब्रिलेटर (आईसीडी) लगाइन्छ । आईसीडीले दोस्रोपटक हुने सडन कार्डियक अरेस्टबाट मृत्यु हुने जोखिमलाई समेत कम गर्ने डा. ओममूर्ति बताउँछन् ।
निष्क्रिय धातु (इनर्ट मेटल) ले बनाइएको यो सानो यन्त्र छाती वा पेटको छालामुनि लगाइन्छ । यसको तारलाई मुटुसँग जोडिन्छ । यो यन्त्रमा भएको चिप (विद्युत्को एकीकृत परिपथ) ले मुटुको ढुकढुकीलाई अनुगमन गर्छ ।
मुटुको धडकन असामान्य हुन लाग्दा यो यन्त्रका माध्यमले मुटुलाई सामान्यत: ४० जुलको विद्युतीय
झड्का दिएर सामान्य पारिन्छ ।
एससीए कसरी चिन्ने ?
सडन कार्डियक अरेस्टको सामान्यत: कुनै लक्षण वा चेतावनी हुँदैन । तर यसको मुख्य रूपमा तीन वटा संकेतमा हामीले ख्याल पुर्‍यायौं भने एमसीआर भएको हुन सक्ने सम्भावना पहिचान गर्न सकिन्छ । यसको पहिलो संकेत हो– कुनै व्यक्तिले एक्कासि होस गुमाउनु । प्रभावित व्यक्ति यसै कारणले लड्छ र तपाईंले हल्लाउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन । नाडी र रक्तचाप बन्द हुन्छ अनि शरीर र मस्तिष्कका अन्य भागमा रगतको आपूर्ति हुँदैन । प्रभावित व्यक्तिले सामान्य तरिकाले सास फेर्न सक्दैन । मुटु एक्कासि तीव्र गतिले धड्किन सुरु हुन्छ ।
अमेरिकास्थित नेसनल हार्ट, लङ एन्ड ब्लड इन्स्टिच्युटका अनुसार भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन (भी–फिब) धेरैजसो एक्कासि हुने कार्डियक अरेस्टको कारण हो । भी–फिब इरिदमिया अर्थात् मुटुको असामान्य र अनियमित चालको एक प्रकार हो । भी–फिबमा मुटुको तल्लो कोठा सामान्य रूपमा धड्किँदैन । यो धेरै तीव्र गतिले र अनियमित रूपले कम्पन्न हुन थाल्छ । यस्तो हुँदा मुटुले अलिकति रगत पनि शरीरमा पम्प गर्न सक्दैन । भी–फिबमा केही मिनेटभित्रै उपचार नगर्दा प्राणघातक हुन्छ ।
यस्तै, मुटुको विद्युतीय प्रणालीमा आएको गडबडीले समेत एससीए उत्पन्न गर्न सक्छ । एससीए मुटुको विद्युतीय संकेत रोकिँदा वा धेरै कम हुँदासमेत हुन्छ । मुटुको मांसपेशीले मुटुको विद्युतीय संकेतप्रति प्रतिक्रिया नदिँदासमेत एससीए हुन सक्छ । केही रोग र अवस्थाले समेत एससीए हुन सक्ने विद्युतीय समस्या मुटुमा उत्पन्न गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कोरोनरी हार्ट डिजिज, गम्भीर शारीरिक तनाव, केही वंशानुगत विकार र मुटुको संरचनात्मक परिवर्तनले समेत एससीए उत्पन्न हुन सक्छ ।
सडन कार्डियक अरेस्ट (एससीए) को जोखिम उमेर बढेसँगै वृद्घि हुन्छ । महिलाको दाँजोमा पुरुषलाई एससीए हुने जोखिम बढी हुन्छ । यस्तै उच्च रक्तचाप, दीर्घकालीन मृगौला रोग, मधुमेह, हार्टफेल लगायतका स्थितिमा एससीए हुने जोखिम बढी हुने गरेको डा. ओममूर्ति औंल्याउँछन् । कोरोनरी मुटु रोग एससीए हुने मुख्य जोखिम हो । मुटुको चालमा गडबडी (इरिदमिया) को चिकित्सकीय इतिहास भएकाहरू, परिवारमा कसैलाई एससीए भएकाहरू, हार्ट अटयाक, हार्टफेल भएकाहरूमा एससीए हुने जोखिम बढ्छ । ड्रग र मदिराको अत्यधिक उपयोग गर्नेहरूमा समेत एससीए हुने जोखिम बढ्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०९:२८
हसन र अलीसँग जंगमको संगम
मंसिर ९, २०७४ गोकर्ण गौतम
काठमाडौं — हमारे दिल से मत खेलोखेलौना टुट जायगा जरा भी ठेस पहुँचे गीए सिसा टुट जायगा
गजल दुनियाँका दुई विख्यात हस्ती मेहदी हसन र गुलाम अलीका लागि गीत कम्पोज गर्ने अवसर जुरेको थियो, दीपक जंगमलाई, त्यो पनि युवावयमै । कसरी ? तीनै रोचक क्षणहरूको स्मरण :
हमारे दिल से मत खेलो
खेलौना टुट जायगा
जरा भी ठेस पहुँचे गी
ए सिसा टुट जायगा
नेपाली सांस्कृतिक टोलीसहित पाकिस्तानको कराँची पुगेका दीपक जंगमले यो गीत गाएर वाहवाही बटुले । त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँका सांस्कृतिक विभागका निर्देशकले जंगमलाई भनेछन्, ‘खान साहेब तपाईंलाई भेट्न चाहिरहनुभएको छ ।’ जंगमले पत्याएनन् । पत्याइहाल्नु कसरी, ती खान साहेब अरू कोही नभएर ‘संहशा–ए–गजल’ (गजलका राजा) को उपमा पाएका मेहदी हसन खान थिए । जंगम अक्मकाएपछि निर्देशकले बेलिविस्तार लगाए । कुनै नेपाली कलाकारले मेहदीका गजल गाएर कराँचीवासीको मन जितेको खबर त्यहाँको चर्चित अखबार ‘डन’ ले छापेछ । त्यही पढेपछि मेहदीले भेट्न खोजेका छन् । जंगमले ‘नाइनास्ती’ गर्ने कुरै थिएन । आखिर पाकिस्तान जानुको एउटा मुख्य कारण मेहदीलाई भेट्नु नै त थियो । त्यही भएर उनका एक दर्जन गीत रियाज गरेका थिए । तर उनले मेहदीलाई भेट्न कष्टै गर्नु परेन, गायिकीको जादूले मेहदी आफैं खोज्दै आइपुगे । ३७ वर्षअगाडिको उक्त पल सम्झँदा जंगमको मुहारमा मुस्कान नाच्छ अझै पनि ।
गजलको लोकप्रियता विश्वव्यापीगरेको पहिलो श्रेय मेहदीलाई जान्छ ।
आफ्नो जमानामा पाकिस्तानी फिल्मको पाश्र्व गायनमा उनको प्रतिस्पर्धी कोही थिएन । जे गाउँथे, त्यही सर्वप्रिय हुन्थ्यो । आफ्नै पिता उस्ताद अजिम खानबाट संगीत सिकेका मेहदी नि:सन्देह ‘लिजेन्ड’ थिए । हो, त्यस्तो महान् कलाकार आफैंले भेटेका थिए, भर्खर २८ वर्ष टेक्दै गरेको ठिटो जंगमलाई । तर सामीप्यता संगीतले मात्र बढाएको रहेनछ । जंगम ‘नेपाली’ भएकाले मेहदीलाई अझ उत्साही बनाएको रहेछ । त्यसको आफ्नै गज्जबको कारण छ ।
यो प्रसंगचाहिँ भारत–पाक विभाजन हुनुअगावैको हो ।
मेहदीका पिता राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको निमन्त्रणामा नेपाल आएका रहेछन्, गजल गाउन । पिताको साथमा फुच्चे मेहदी पनि थिए । चित्लाङसम्म जसोतसो आइपुगे । त्यहाँबाट फिटिक्कै हिँड्न सकेनन् । त्यही भएर उनलाई डोकोमा बोकेर काठमाडौं ल्याइएको रहेछ । भेटको केही मिनेटमै यही रिमरिम तर स्वर्णिम याद सुनाएका थिए मेहदीले । जंगम भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई दरबारमा भव्य स्वागत गरिएको रहेछ । त्यही भएर खान साहेबलाई नेपाल भनेको संगीतको उच्च कदर हुने देश हो भन्ने छाप बसेको रहेछ ।’ पछि मेहदी गजल दुनियाँको बादशाह बने तर नेपाल आउने संयोग जुरेको थिएन । त्यति मिठो सम्झना बोकेको देशको कलाकारले आफ्नै गीत गाएपछि मेहदीलाई दोब्बर खुसी मिलेको थियो । जंगमको त झ्न के कुरा गर्नु ! कार्यक्रम सकिएपछि अरू कराँची घुम्न निस्किए, उनीचाहिं मेहदीकै साथ । त्यो पल यसरी सम्झछन्, ‘म संगीतको प्यासी थिएँ, उहाँ महासागर । त्यसैले एकाग्र भएर उहाँको अनुभव सुनें ।’ रियाज कसरी गर्ने, कति घण्टा गर्ने, आवाजको लेभल कति राख्ने ? जस्ता प्रश्नको ओइरो लगाएका थिए जंगमले । मेहदी मुस्कुराउँदै जवाफ दिन्थे ।
तर यो कुनै दुई संगीतकर्मीको सामान्य भेटझैं सीमित भएन । यसले नेपाल र पाकिस्तानबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाएन मात्र, त्यति अग्लो कदका गायकले नेपाली गीत गाए, त्यो पनि राजा महेन्द्रद्वारा रचित ।
यसरी जुरेको थियो त्यो अवसर :
जंगम कराँचीबाट फर्किएको तीन वर्षपछि अर्थात् ०४० सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘साम–ए–गजल’ आयोजना गरियो, आकर्षणको केन्द्रमा थिए, मेहदी । उनले नेपाली गजल पनि गाउने इच्छा व्यक्त गरे । गीत छानियो, मविवि शाहको ‘कसरी बुझाउँm यो दिल...’ । सुरुमा यो गीतमा मेहदी आफैंले ट्युन भर्न खोजे तर उनलाई चित्त बुझेनछ । गीतको खास भाव पनि त बुझेका थिएनन् । त्यही भएर संगीतबद्ध गर्न मेहदी आफैंले छाने, जंगमलाई । भन्छन्, ‘मेहदीजस्तो महान् हस्तीका लागि एक–दुई दिनमै गीत तयार पार्नुपर्ने भएकाले डर लागेको थियो । धन्न ! उहाँले मेरो ट्युन रुचाउनु भयो ।’ यो गीत त्यसअगावै कोइलीदेवी, लिली सिंह र निर्मला देवीको स्वरमा रेकर्ड भइसकेको थियो फरक–फरक धुनमा । विडम्बनाचाहिँ ! मेहदीको आवाजमा स्टुडियो रेकर्डचाहिँ हुन सकेन । अहिले युट्युबमा भेटिने मेहदीको आवाज प्रज्ञा भवनमा भएको लाइभ कार्यक्रमको ‘रेकर्डेड भर्सन’ हो । जहाँ हार्मोनियम र तबला मात्र बजाइएको छ । मेहदीको नेपाल बसाइ ज्यादै छोटो र उनी आबद्ध म्युजिक कम्पनीसँग सम्पर्क हुन नसक्दा रेकर्ड गर्ने अवसर नजुरेको जंगमको भनाइ छ ।
मेहदी हसन, नारायणगोपाल, जंगमलगायत ।
तर मेहदी र नेपाली संगीतको सम्बन्धमा यही पूर्णविराम लागेन ।
‘साम–ए–गजल’ सकिएपछि मेहदीलाई गोरखा दक्षिण बाहु पहिलो दर्जा प्रदान गरियो । यत्रो सम्मान दरबारमा कुनै पनि विदेशी कलाकारले पाएको पहिलो अवसर थियो । राजा वीरेन्द्र र मेहदीको मित्रता कति गाढा भयो भने वीरेन्द्र पाकिस्तान जाँदा विमानस्थलमा स्वागत गर्न तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपतिसँग मेहदी पनि पुगेका थिए । एक बसाइका क्रममा वीरेन्द्रले भनेछन्, ‘मेरी मिसेस (चाँदनी शाह) पनि शायरी लेख्छिन् । हजुरले गाउनुपर्‍यो ।’ जंगम सुनाउँछन्, ‘मेहदी साबले ‘हुन्छ’ भन्नुभएछ अनि संगीतकारमा चाहिं मेरो नाम लिनुभएछ । त्यतिबेलासम्म मलाई दरबारले चिनेको थिएन । उहाँले नै चिनाउनुभयो ।’ त्यसपछि चाँदनी शाहको १० वटा गीत छानियो । सुरुमा हिन्दी अनि उर्दूमा अनुवाद गरियो । गीत बोकेर जंगम कराँची नै गए, मेहदीको घरमा । ६ वटा गीत उतै रेकर्ड भयो तर अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । जंगमका अनुसार यी गीत रेडियो नेपाल र रेडियो पाकिस्तानसँग छ । नेपाल टेलिभिजनले भिडियो बनाउने वाचा गरेको थियो तर सबै कुरैमा सीमित भयो । तैपनि जंगमको आशा मरिसकेको छैन । भन्छन्, ‘ती गीत पब्लिकसम्म पुर्‍याउनु मेरो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो ।’
एकातिर मेहदीको स्वरमा मविवि शाहको गीत स्टुडियो रेकर्ड गर्ने मेसो मिलेन, अर्कातिर रेकर्ड भएका चाँदनी शाहका गीत श्रोतासम्म पुगेनन् । यसको पीडा त छँदै छ । तर पनि संगीतकार जंगमलाई मन बुझाउने अर्को गतिलो कारण पनि छ । त्यो हो, मेहदीकै कारण उनले अर्का विख्यात गजल गायक गुलाम अलीसँग संगत गर्ने अवसर पाए । गुलाम अलीका लागि चार गीतमा संगीत दिए, सबै सदावहार लोकप्रिय छन् ।
यो प्रसंग हो, २०४१ सालमा गुलाम अली नेपाल आउँदाको । जतिबेला ‘चुपके चुपके रात दिन...’, ‘हंगामा...’ लगायतका गजलबाट उनले हंगामा मच्चाइरहेका थिए । हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत र गजलको सम्मिश्रण गरेर वाहवाही कमाएका गुलाम अली आफ्नो चमत्कारयुक्त स्वरले जोकोहीलाई लठ्ठै बनाउँथे । उनका धेरै हिट गजल भारतीय फिल्ममा समेत प्रयोग गरिएका छन् । मेहदीपछि गजलको दुनियाँमा ठूलो नाम छ, अलीको । यिनै गायक नेपाल आउँदा नेपाली गीत रेकर्ड गर्ने योजनामा थिएनन् मात्र, उतैबाट रचनाकार र संगीतकारको नामसमेत तय गरिसकेका थिए । रचनाकार मविवि शाह, संगीतकारचाहिँ दीपक जंगम । पाकिस्तानमै मेहदीले यी नाम सुझाएका रहेछन् उनलाई । त्यसैले त नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा भेट्दा जंगमले आफ्नो परिचय दिनै परेन । बरु अली आफैंले सीधै सोधेछन्, ‘चार दिनमा चारवटा गीत बनाउन सक्नुहुन्छ ?’ जंगम हाँस्दै भन्छन्, “मैले ‘सक्छु’ भनें तर कुन–कुन गीत संगीतबद्ध गर्ने भनेर छानिएको समेत थिएन । त्यसैले घर पुगेपछि अलमलमा परें ।’
तैपनि पछि हट्ने गुञ्जायस थिएन । मविवि शाहको गीतिसंग्रह ‘फेरि उसैको लागि’ पल्टाएँ । चार गीत छानें । ‘लोलाएका ती ठूला तिम्रा दुई नजरले...’ कम्पोजिसन गर्न हार्मोनियम समाउँदा रातको ११ बजेको थियो । बिहान ३ बजे पूरा भयो । ६ बजे पद्मकन्या क्याम्पस पढाउन पुग्नुपर्ने । तर दिउँसोसम्म गुलाम अलीलाई कम्तीमा दुईवटा गीत सुनाउनुपर्ने । क्या फसाद ! त्यसैले त कलेज गए, विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिए अनि कक्षा कोठामै कम्पोज गर्न थाले । २ घण्टामा त्यो पनि विद्यार्थीमाझ कम्पोज गरेको गीत अरू कुनै नभएर ‘किन–किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ...’ थियो, जुन आज पनि हरेक उमेर समूहका श्रोताले उत्तिकै रुचाउँछन् । तेस्रो गीत थियो, ‘गाजलु ती ठूलाठूला आँखा...’ अनि चौथोचाहिँ ‘के छ र दिऊँ...’ ।
रेकर्ड गर्न जाँदा रेडियो नेपालमा गुलाम अलीको भव्य स्वागत गरिएको दृश्य जंगमले अझ बिर्सिएका छैनन् । हरेक गीत दुई घण्टा रियाज गरेपछि रेकर्ड गरिएको थियो, १ वैशाख २०४२ मा । जतिबेला जंगम ३२ वर्ष पुग्दै थिए । यी गीतले गुलाम अलीको नेपाली गायन अमर मात्र बनाएन, जंगम आमभन्दा अलग संगीतकारका रूपमा स्थापितसमेत भए । त्यति छोटो समयमा त्यति दिग्गज कलाकारका लागि त्यति सुमधुर गीत कम्पोज गर्नु चानचुने क्षमता हो र ?
जंगम आफैंलाई लाग्दोरहेछ, ‘संगीत यात्राको सुरुआततिरै मेहदी र गुलाम अलीजस्ता ठूला हस्तीसँग सहकार्य गर्न पाउनु र सफल हुनु साँच्चै भाग्यकोखेल हो ।’